Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » France Travel News » Miaraka amina tranga COVID-30,702 miisa 19 dia eo am-pelatanan'ny fikatsoan'ny firenena manontolo i Frantsa
Dosis vaksinin'ny COVID-11 19 tapitrisa efa natantona tany Frantsa
Olona 188 no naiditra hopitaly niaraka tamin'ny COVID-19 tao anatin'ny iray andro monja tany Frantsa
95,337 ny olona matin'ny coronavirus hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina tany Frantsa
Akaiky ny fahatapahana ny rafi-pitsaboana nasionaly any Frantsa
Navoakan'ny manampahefana frantsay fahasalamana ny antontam-baovao farany momba ny coronavirus androany, izay naneho fa manakaiky ny fahatapahana ny rafi-pitsaboana nasionaly ary mihidy eo amin'ny karatra ny fanidiana ny firenena.
Ny firenena dia nanoratra tranga 30,702 19 COVID-24 tao anatin'ny 4.5 ora lasa izay, nanosika ny totalim-pirenena ho XNUMX tapitrisa.
Tao anatin'ny iray andro, olona 188 no naiditra hopitaly, ary 28,510 no totaliny. Ny marary COVID-19 dia manana fandriana famelomana 5,072 amin'izao fotoana izao, ny isa lehibe indrindra hatramin'ny tapaky ny volana novambra 2020, raha niditra tao amin'ny efitranony faharoa ny firenena.
Nahatratra 95,337 ny olona matin'ny coronavirus hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina. Ny isan'ny maty dia 360 tamin'ny alatsinainy ary 381 ny talata.
Tsy toy ny mpiara-monina aminy eropeana, Frantsa dia nijanona tsy nametraka fanidiana fanidiana fahatelo ary nanokatra ny sekoly, saingy nisy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina nanomboka tamin'ny 16 Janoary.
Any amin'ny faritra be risika eto amin'ny firenena, mihidy ny magazay tsy ilaina, asaina miasa any an-trano ny olona ary voarara ny fivezivezena any amin'ny faritra hafa.
"Tsy maintsy feranay ny fihanaky ny viriosy ary tsy hanao izany amin'ny fepetra sasany izahay," hoy i Gilles Pialoux, lohan'ny aretina mifindra ao amin'ny hopitaly Tenon any Paris.
"Saika tsy misy vokany ny fepetra fanapahana," hoy izy. “Hatramin'ny volana Janoary, tsy misy fitoviana ara-tsiansa ireo fanapahan-kevitra politika.”
Ny alahady teo dia dokotera hopitaly 41 tany amin'ny faritr'i Paris no nanao sonia lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny gazety isan-kerinandro Le Journal du Dimanche, nilaza fa terena izy ireo hisafidy amin'ireo marary hitsabo vonjy maika noho ireo hopitaly be loatra.
Niresaka tao amin'ny Antenimieram-pirenena ny harivan'io, ny minisitry ny fahasalamana, Olivier Veran, dia nanome toky fa "aza avela ho ao anatin'ny toe-javatra tokony hisafidianan'izy ireo amin'ireo marary ny dokotera."
"Ny fepetra noraisina folo andro lasa izay dia mety hanomboka haneho ny vokany, ho hitantsika izany ao anatin'ny 24-48 ora. Raha ilaina dia manapa-kevitra izahay fa misy fepetra hafa hiarovana ny vahoaka frantsay, ”hoy izy.
Ny filoham-pirenena Emmanuel Macron dia hitarika ny fivorian'ny filankevitry ny fiarovam-pirenena ny alarobia izao hanapahana hevitra momba ny fameperana vaovao.